समायोजन मारमा प्रदेश अस्पताल- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
(वीरेन्द्रनगर) — सरकारले सुरु गरेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाको मारमा सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताल परेको छ  । समायोजनका क्रममा प्रदेश रोजेका डाक्टर संघ, स्थानीय तह तथा अन्य प्रदेशमा परेपछि अस्पताल डाक्टरविहीन हुन पुगेको हो  ।
(वीरेन्द्रनगर) - सरकारले सुरु गरेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाको मारमा सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताल परेको छ । समायोजनका क्रममा प्रदेश रोजेका डाक्टर संघ, स्थानीय तह तथा अन्य प्रदेशमा परेपछि अस्पताल डाक्टरविहीन हुन पुगेको हो । ३० विशेषज्ञ डाक्टर दरबन्दी रहेको प्रदेश अस्पतालमा अहिले कार्यरत ११ डाक्टरमध्ये ९ जनाले संघ र अन्यले प्रदेश रोजेपछि अस्पताल विशेषज्ञविहीन भएको हो ।
प्रकाशित : वैशाख ४, २०७६ १२:३६
व्रिज द ग्याप (अन्तर कम गरौं) नारासहित हुन लागेको उक्त सम्मेलन शहीदधर्म भक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, अङ्ग प्रत्यारेपण समाज नेपाल र इन्डियन प्रत्यारोपण समाजको सहकार्यमा हुन लागेको हो । सम्मेलनका अध्यक्षमध्येका एक प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द श्रेष्ठका अनुसार पहिलो दिन प्रत्यारोपणसम्बन्धी प्राविधिक विषयमा छलफल हुनेछ । दोस्रो दिन नेपालको ७५ वटा जिल्ला अस्पतालका चिकित्सक र नर्स समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने गरी मष्तिष्क मृत्युबाट हुने अङ्गदानसम्बन्धी विशेष छलफल हुने बताइएको छ ।
कार्यक्रमको वैज्ञानिक समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. राकेशकुमार बर्मा, सदस्य सचिवमा डा. सुमितआचार्य तथा सहसचिवमा इन्डियन अङ्ग प्रत्यारोपण समाजबाट डा. विवेक कुटे छन् । नेपालमा वर्षेनी ३ हजार जनाको मृगौला र १ हजार जनाको कलेजो फेल हुने गरेको छ ।